Akshay oo aan Box Office-ka kula dagaalami doonin Akshay bisha April ee sannadka dambe – Filimside.net
Ka dib markii filimsameeye R. Balki uu xaqiijiyey waqtiga la daawan doono filimkiisa Padman, wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan inuu Box Office-ka India heli doono tartan u dhexeeya Akshay Kumar vs Akshay Kumar ayaa sarre u kacay.
Maxaa yeelay Akshay Kumar ayaa wuxuu door hogaan ah ku leeyahay labada filim ee Padman iyo Robot 2.0 oo uu atoore ka yahay Superstar Rajinikanth oo ay Soomaalidu u taqaanno Jeestoole.
Si kastaba ha ahaatee, hadda wax walba waa ay isbedeleen, filimka Robot 2.0 lama daawan doono 26ka Jannaayo 2018ka. Taageereyaasha Superstar Rajinikanth ayaana filimkaan sugi doona illaa bisha April 2018 markaasoo tiyaatarrada si rasmi ah loo saari doono, sida kooxda filimkaan ay xaqiijiyeen.
Shirkadda Lyca Productions oo maalgelisay filimkaan Robot 2.0 oo ah filimka lagu sameeyey qiimaha ugu badan taariikhda India ayaa waxay daaha ka qaadeen in filimkooda la daawan doono bisha April 2018ka, waxaana hogaamiye ka ah Superstar Rajinikanth, Akshay Kumar iyo Amy Jackson – Halka uu Director ka yahay Shankar. Muusigguna waa AR Rahman.
Sidaas darteed Akshay Kumar ayaan Box Office-ka kula tartami doonin Akshay Kumar ka dib markii uu baaqda Dagaalkii Box Office-ka ee maalinta Jamhuuriyadda India.